Samsung Galaxy J5 (2017) wuxuu helayaa cusbooneysiin amni oo ka dhan ah BlueBorne | Androidsis
Aaron Rivas | | Samsung, Amniga
In muddo ah hadda, Android waxaa waxyeeleeyay furin kala duwan kuwaas oo u soo baxayay inay ka careysiiyaan khibradeena isticmaale, awood u siinta helitaanka iyo xakamaynta iyada oo aan fasax laga helin haakariska iyo dadka xaasidnimada ah ... Xaaladdan oo kale, waxaan ka hadli doonaa BlueBorne, mid ka mid ah khayaanadii ugu dambaysay ee, kaliya ma weeraraan Android, laakiin sidoo kale IOS, Linux, Windows iyo aaladaha casriga ah sida Smarts TV.
Samsung Galaxy J5 wuxuu ahaa mid nugul sababtoo ah ma haysato, ama haysatay, wax balastar amni oo ka dhan ah furinkan ... Tani way is bedeshay sababo la xiriira cusbooneysiin cusub oo loo soo saaray terminalkan.
1 Cusboonaysiinta ka dhanka ah BlueBorne ee Samsung Galaxy J5 (2017) hadda waa la heli karaa
2 BlueBorne: Hanjabaad joogto ah
2.1 Maxay tani u dhacdaa?
3 BlueBorne kaliya ma saameyneyso taleefannada casriga ah ee Android
Cusboonaysiinta ka dhanka ah BlueBorne ee Samsung Galaxy J5 (2017) hadda waa la heli karaa
Haddii aadan wali cusbooneysiin kanaga Samsung Galaxy J5 (2017), waxaan kugula talineynaa inaad sida ugu dhaqsiyaha badan u sameyso.
Cusbooneysiinta cusbooneysiinta 391,88 mb iyo, si aad u hubiso gacanta haddii aan horeyba u haysanno, tag oo keliya 'Dejinta' iyo gudaha 'Cusbooneysiinta gacanta', waa inaan helnaa cusbooneysiinta naga difaaci doonta BlueBorne.
Hadaadan wali ogayn waa maxay BlueBorne iyo sida khaldan ee adiga kuu saamayn karta, waxaad gaadhay goobta la tilmaamay. Tan iyo markii Androidsis, waxaan dooneynaa inaan ku farayno waxyaabaha taban ee virus-kan khatarta ah uu sababi karo, ee akhriska sii wad ...
BlueBorne: Hanjabaad joogto ah
Markii hore, halkan gudaha Androidsis, waan ka hadli doonaa BlueBorne y sida loo ogaado in moobaylkaagu u nugul yahay.
Malware BlueBorne waxaa helay Armis Labs, Shirkad kombuyuutar oo qaabilsan amniga ayaa diirada saartay IoT (Internetka Waxyaabaha).
Marka xigta, waxaan ku tusi doonnaa fiidiyoow kaas oo, Armis Labs ayaa ina tusaya sida uu u faafo una sharxo halista malware-kan.
Fiidiyowga, inkasta oo uu ku qoran yahay Ingiriis, waan arki karnaa taas faafinta BlueBorne waa mid aad u fudud. Kaliya waxaad ubaahantahay inaad Bluetooth shaqeysid iyo, mid fudud oo fudud, waxaan heli doonaa khayaanada anaga oo aan is ogeyn.
Maxay tani u dhacdaa?
Tan waxaa u sabab ah a arrinta amniga ee borotokoolka isku xirnaanta Shabakadda Bluetooth (BNEP), kaas oo u oggolaanaya qalabka inay wadaagaan internetka.
Este khalkhal amni u oggolaan doonaa furin BlueBorne, fuliya koodhadh lagu xakameynayo terminaalkeena fog.
BlueBorne kaliya ma saameyneyso taleefannada casriga ah ee Android
Fiidiyowgan, Armis Shaybaarada waxay na tusaysaa, qaybta sare ee shaashadda fiidiyaha, waxa hackerku maqlo; qaybta bidix ee hoose ee shaashadda, waxa jabsaduhu arko, iyo, qaybta hoose ee midig, waxaan ku samaynno saacadeena caqliga badan.
Fiidiyowgaan, aaladda la adeegsaday waxay noqotay Samsung Gear S3.
Sidii aan horay u soo sheegnay. BlueBorne kaliya ma saameyneyso taleefannada casriga ah ee Android, ama shirkadaha kale sida Apple, Microsoft, Linux iyo kuwa kale, laakiin ku dhowaad dhammaan aaladaha casriga ah, oo ay ku jiraan, sidaan arki karnay, Samsung Gear S3.
Haddii qalabkaaga uu ku dhaco cudurka BlueBorne, wax kastoo aad sameyso, kuwa wax jabsada ayaa arki doona.
Marka hadda waad ogtahay ... Haddii aad leedahay Taleefan Casri ah Samsung Galaxy J5 (2017) oo aadan toos u helin casriyeynta, fadlan sida ugu dhaqsiyaha badan u samee.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Amniga » Samsung Galaxy J5 (2017) wuxuu helayaa casriyeyn amniga ah oo ka dhan ah BlueBorne
Samsung waxay u sameysaa mashiin lagu qodo Bitcoins-ka gaboobay Galaxy S5
Kobcinta weyn ee Halloween, illaa 70% off at Lightinthebox